Damee maanufakchariingii tumsuun egeree biyyattii har'a bu'uuressuudha
Damee maanufakchariingii tumsuun egeree biyyattii har'a bu'uuressuudha Featured
Damee maanufaakchariingiif mootummaan xiyyeeffannaa kenneen abbootii qabeenyaa amecharratti bobba'aniifi interpiraayizoota maayikiroofi xixiqaan (IMX) gurmaa'aniif deeggarsa addaa gochuun ce'umsa dinagdee qonnarraa gara industiriitti taasifamuuf tumsa akka taasisan deeggarsa gochuurratti argama.
Keessumaa interpiraayizoota gara industiriiti akka ceesisuuf deeggarsa taasisuufi addatti ammoo meeshaalee kaappitaalaa dhiyeessuun damecha jajjabbeessuurrati argama. Interpiraayizoonni, faayinaansii meeshaalee kaappitaalaa mootummaarraa argataniin jijjiiramaafi bu'aqabeessa ta'uusaanii ilaalchisee tibbana baazaariifi egzibiishinii industiriiwwan maanufaakchariingii giddugaleessaafi gadaanoo biyyaaleessaarratti interpiraayizoota Naannoo Oromiyaarraa hirmaatan dubbifne keessaa ogeettii dizaayinii uffataa kan ta'an Aadde Fiqirtee Hayiluu isaan tokko. Isaanis waldaa IMXn gurmaa'uun omisha uffannaafi boorsaawwan garagaraa omishuun gabaaf dhiyeessu.
Aadde Fiqirteen idileedhaan uffannafi boorsaawwan omishan cinaatti namoonni akkaataa ajajchiifataniin omishawwan huccuu hojjetu. Yeroo ammaas waldootii damee manufaakchariingiirratti bobba'an keessaa guddatoo jedhamuusaanii himu. Interpiraayizichi isaaniin kan ogganamu yoo ta'u, Waldaa Aksiyoonaa Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa Oromiyaarraa deegarsa meeshaalee omishaa argachuu akka danda'an eeru.
Akka ibsasaaniitti duraan omishasaanii maashinoota lama qofaan hojjechuun yeroosaanii qisaasessaa akka turan ibsu. Innis maashinii huccuu ittiin hodhan muraasa waan ta'eef omisha yeroodhaan gabaaf dhiyeessuurratti dhiibbaa akka uumaa tureedha kan ibsan.
Wayita sana omishisaanii yeroon gabaa akka dhaqqabuuf manatti harkaan, yeroo biraa ammoo kaffaltiidhaan hojjechiisaa akka turan dubbatu. Erga deeggarsa meeshaalee kaappitaalaatiin maashinoota dabalataa argatanii as yeroonsaanii qisaasa'uun hafee omishisaaniis yeroon gabaaf dhiyaachuu waan eegaleef “Amma waan hundaa naaf salphiseera” jedhu.
Aadde Fiqirteen akka ibsanitti duraan maashinoota muraasaan waan hojjetaniif galiinsaanii gadaanaa ture. Yeroo ammaa ammoo galiinsaanii akka fooyya'eedha kan himan. Kunis sababa deeggarsa maashiniiwwan uffannaa tokko guutummaatti hodhee baasu sagal liqiidhaan argatanitiin akka ta'e eeru.
Maashinoota liqiidhaan argatan kunneen qarshii kuma 100 olitti kan tilmaamu yoo ta'u, yeroo ammaa walakkaa ol liqiisaa kaffalanii xumuranii maashina kana dhuunfachuuf kaffaltii muraasni akka isaanirratti hafeedha Gaazexaa Bariisaatti kan himan.
Waldaa Aksiyoonaa Daldalaa Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa Oromiyaarraa, Obbo Pheexiroos Tafarii gamasaaniin, waldichi kan dhaabbate seektara maanufaakchariingii deeggaruufi interpiraayizoonni hanqina meeshaaleetiin hojiinsaanii akka higufanne deeggaruuf akka ta'e himu.
Waldaan aksiyoonaa kun erga hundeeffamee waggaa lama otoo hinguutiin akka Oromiyaatti waldaalee 225 oliif meeshaalee kaappitaalaa 706 dhiyeesseera. Yeroo ammaas waldaaleen IMX jalqabduu keessattuu, barattoota yunivarsitiirraa eebbifamanii seektara maanufaakcharingii, agiroo pirosesiingii, hodhaa huccuurratti gurmaa'aniif maashina dhiyeessaa akka jiran dubbatu. Akkasumas, waldaalee buleeyyii seektaricharratti bobba'aniif deeggarsa maashinii taasisuun, interpiraayizoonni hedduun jireenyaanis ta'e galiidhaan fooyya'aa akka jiran ibsu.
Waldichi waldaalee IMX meeshaalee dhiyeessuun dura qorannoo bu'uuraalee misoomaa qabaachuu, waarummaa (ittifufummaa) karoora bizinasiisaanii, leecalloowwan omishaa naannawa itti hundeeffaman jiraachuun erga xiinxalamee booda akka ta'e kan eeraan Obbo Pheexiroos, waldaaleen meeshaalee kana fudhatan yeroo ammaa carraa hojii kanneen hojii hinqabneef uumaa jiru. Jijjiirama qabatamaa argisiisaa akka jiranis ni dubbatu.
Walumaagala, interpiraayizoota damee maanufaakchariingiirratti bobba'aniif deeggarsa meeshaalee kaappitaalaa taasisuun bu'uura ce'umsa gara industiriitti taasifamu tottolchuuti. Biyyattiin damee maanufaakchariingii jajjabeessuun carraa hojii bal'aa uumuufis kan tumsuudha.
Kanaaf, egeree biyyattii dinagdee industiriin durfamuun badhaatuu taasisuuf jalqabbii jiru caalaatti tarkaanfachiisuuf hunduu ciminaan tumsuu qaba.
Torban kana/This_Week 43587
Guyyaa mara/All_Days 1468367